Ko iyo 2 GB ye RAM yeiyo iPhone 7 uye iyo 3 GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus inokanganisa Safari? | IPhone nhau
Ko iyo 2 GB ye RAM yeiyo iPhone 7 uye iyo 3 GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus inokanganisa Safari?
Gore rakapera, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakaburitsa iyo yekutanga iPhone ine 2GB ye RAM, asi yanga isiri iyo yekutanga kambani kambani, sezvo iyo iPad Air 2 yakagamuchira iyo 2GB ye RAM gore rapfuura. Yekutanga kumhanyisa bvunzo muSafari pakati peiyo iPhone 6 Plus uye iyo iPhone 6s Plus yakaratidza isu kuti iyo yekuwedzera GB ye RAM iyo Apple yainge yaisanganisira mune s vhezheni, yaionekwa uye zvishoma zvishoma muSafari, kunyanya pakuvhura nekuvhara matabo uye kurodha zvirimo zvakafanana. Gore rino, mushure mekumisikidzwa kweiyo iPhone 7 Plus ine 3 GB ye RAM, vashandisi vazhinji vanga vachinetseka kuti iyo yekuwedzera GB inogona kukanganisa mashandiro eSafari uye manejimendi ematebhu atakavhura.
Vakomana pa9to5Mac vaita bvunzo yekuita yeSafari nematebhu ayo pakati peiyo iPhone 7 ine 2 GB ye RAM uye iyo iPhone 7 Plus, iyo sekuziva kwedu tese inotarisirwa ne3 GB ye RAM. Apple yaona kukosha kwekuwedzera imwe GB kuitira kuti iyo mbiri kamera iyo inoburitsa iyo Plus modhi inogona kubata kugona kunopihwa nemakamera maviri akavakirwa muchigadzirwa.
Sekuona kwedu muvhidhiyo, mutsauko mukutungamira kweS Safari tabo haunyatso kuoneka, nekuti zvese zvishandiso zvinoremedza mapeji chaizvo panguva imwe chete. Iyi GB ye RAM haina kusanganisira mukushanda kweSafari zvirinani mune iri basa. Pane ino nguva, iyo 7-inch iPhone 4,7 haina kukanganiswazve mukushanda kwayo sezvazvinoitika mune dzakawanda zvekufananidza izvo izvo zviri zviviri zvigadzirwa zvinoiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Ko iyo 2 GB ye RAM yeiyo iPhone 7 uye iyo 3 GB ye RAM yeiyo iPhone 7 Plus inokanganisa Safari?
Nzvimbo nyowani yekutumira mameseji eGoogle, Allo, inouya kuIOS
3D Anatomy yemahara kwenguva pfupi